Waxaan La Kulmay, Tooni Koos & Xaaskiisa Wuxuuna Ogolaaday In Uu Ku Soo Biiro Old Trafford.-David Moyes Oo Wali Calool Xumo U Haya Maamulka Man United - Gool24.Net
Waxaan La Kulmay, Tooni Koos & Xaaskiisa Wuxuuna Ogolaaday In Uu Ku Soo Biiro Old Trafford.-David Moyes Oo Wali Calool Xumo U Haya Maamulka Man United
Tababarihii Manchester United ku fashilmay ee David Moyes ayaa ilaa hadda ay maskaxdiisa ka guuxaysaa qaabkii uu heshiiska dhamayska tiran ula gaadhay xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Germany iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos oo markaas ka tirsanaa kooxda Bayern Munich.
David Moyes ayaa sanadkii 2013 kii waxa uu xidhay kabihii ka waa waynaa ee Sir Alex Ferguson kaas oo rubx qarni in ka badan ka soo shaqaynaayay Manchester United waxayna taasi keentay in Moyes uu sababo badan oo jiray awgeed u soo fashilmay.
Laakiin halka arin ee aanu ilaa hadda ilaawi karin ayaa ah qaabkii uu ugu guulaystay in uu heshiis buuxa la galay Toni Kroos oo markaas diyaar u ahaa in uu Bayern Munich ka baxo wuxuuna Moyes sheegay in uu la kulmay Kroos, xaaskiisa iyo waliba qoyskiisa.
David Moyes oo maanta la hadlayay TalkSport ayaa shaaciyay ilaa xad heerka uu la gaadhay Toni Kroos kaas oo ugu dhawaan noqday ciyaartoy Manchester United ah balse waxa uu ilaa hadda ka cadhaysan yahay in qorshihii Kroos uu wax badan ka caawin lahaa in uu Man United la guulaysto.
David Moyes oo ka hadlaya heerkii uu isku siiyay Toni Kroos ayaa yidhi: “Waxaan Toni Kroos heshiis kula gaadhay in uu aniga iigu yimaado Manchester United. Markii uu Bayern Munich joogay, waxaan la kulmay isaga, xaaskiisa … dhamaantayo waanu heshiinay”.
Laakiin maamulka Manchester United oo si deg deg ah kalsoonidii ugula laabtay David Moyes ayaan ka faa’iidaysan heshiiska uu Moyes la gaadhay Kroos kaas oo wax badan ka caawin karayay xalaadii ay ku jirtay.
Laakiin markii ay Manchester United iska dayacday heshiiskii Toni Kroos waxaa markiiba ka dul qaaday kooxda uu ilaa hadda Kroos ka tirsan yahay ee Real Madrid oo uu koobab muhiim ah udub dhexaad ugu ahaa.